Jesu Anoendeswa Kuna Pondiyo Pirato | Upenyu hwaJesu
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Alur Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Toba) Bicol Boulou Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chuvash Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Jula Kabiye Kazakh Kazakh (Arabic) Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwanyama Lingala Lithuanian Lomwe Luganda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mauritian Creole Maya Moore Myanmar Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Nepali Nigerian Pidgin Norwegian Nyaneka Nyungwe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tok Pisin Tshiluba Tshwa Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Vietnamese Wallisian Waray-Waray Yoruba
Anotongwa neSanihedrini Ozoendeswa Kuna Pirato
MATEU 27:1-11 MAKO 15:1 RUKA 22:66–23:3 JOHANI 18:28-35
ANOMIRA PAMBERI PEDARE RESANIHEDRINI MANGWANANI
JUDHASI ISKARIYOTI ANOEDZA KUZVISUNGIRIRA
JESU ANOENDESWA KUNA PIRATO KUTI ANOTONGERWA RUFU
Petro paaramba Jesu kechitatu, kunze kwanga kwava kuda kutoedza. Dare risiri repamutemo ranga ragarwa neSanihedrini raparara. Kuchingochena, musi weChishanu, vanogara rimwe dare zvekare zvimwe nechinangwa chekuita kuti dare raitwa usiku rionekwe serepamutemo. Jesu anobva amiswa pamberi pavo.
Dare iri rinodzokororazve mashoko aro okuti: “Kana uri iwe Kristu, tiudze.” Jesu anopindura kuti: “Kunyange kana ndikakuudzai, hamungambozvitendi. Zvakare, kana ndikakubvunzai, hamungambopinduri.” Zvisinei, Jesu anovapindura neushingi achiratidza kuti ndiye akataurwa nezvake pana Dhanieri 7:13. Anoti: “Kubvira zvino Mwanakomana womunhu achange agere kuruoko rwaMwari rworudyi rune simba.”—Ruka 22:67-69; Mateu 26:63.
Vanoramba vachingomubvunza kuti: “Saka, uri Mwanakomana waMwari here?” Jesu anopindura kuti: “Imimi ndimi muri kutaura kuti ndini.” Kubvuma kwaaita uku vanobva vakuti kumhura, vochiona sechikonzero chekumutongera rufu. Vanobvunza kuti: “Tichadireizve humwe uchapupu?” (Ruka 22:70, 71; Mako 14:64) Saka vanobva vasunga Jesu voenda naye kuna Gavhuna weRoma Pondiyo Pirato.
Zvimwe Judhasi Iskariyoti anoona Jesu achiendwa naye kuna Pirato. Paanoona kuti Jesu atongerwa rufu, anotanga kunzwa kakuzvidemba. Zvisinei, pane kuti apfidze zvechokwadi kuna Mwari, anoenda kunodzosera masirivha aya 30. Judhasi anoudza vapristi vakuru kuti: “Ndakatadza pandakatengesa ropa rakarurama.” Asi vanomuchenamira vachiti: “Izvozvo zvinei nesu? Unofanira kuzvionera!”—Mateu 27:4.
Judhasi anosiya akanda masirivha aya 30 mutemberi obva atowedzera pachivi chake nekuedza kuzviuraya. Paanenge achiedza kuzvisungirira, kunenge kuti bazi remuti waari kuedza kuzvisungirira pariri rinotyoka. Anodonhera pamatombo ari pasi, muviri wake wobva watsemuka nepakati.—Mabasa 1:17, 18.
Jesu anoendeswa kumuzinda waPondiyo Pirato achiri mangwanani-ngwanani. Asi vaJudha vaenda naye ikoko vanoramba kupinda. Vanofunga kuti kupinda mune vanhu vasiri vaJudha kunovasvibisa. Izvi zvingazovaita kuti vasakodzera kudya makeke asina kuviriswa musi waNisani 15, musi wekutanga weMutambo Wemakeke Asina Kuviriswa, uyo unotorwa sekuenderera mberi kwenguva yePaseka.
Pirato anobuda ovabvunza kuti: “Munhu uyu munomupomera mhosva yei?” Vanomupindura kuti: “Kudai munhu uyu anga asiri munhu anoita zvakaipa, tingadai tisina kumuisa kwamuri.” Zvichida Pirato anoona kuti vari kuda kumumanikidza kuita zvido zvavo, saka anoti: “Mutorei imi mumutonge maererano nomutemo wenyu.” VaJudha vanoratidza pfungwa dzavo dzeumhondi nokumupindura kuti: “Isu hatibvumirwi nomutemo kuti tiuraye munhu.”—Johani 18:29-31.
Zviripo ndezvokuti kana vakauraya Jesu pamazuva emutambo wePaseka, zvinogona kukonzera mhirizhonga. Asi kana vakaita kuti aurayiwe nevaRoma, avo vane mvumo yekuuraya vanenge vapandukira hurumende, zvichaita kuti vaJudha ava vasanzi nevanhu vane mhosva.
Vatungamiriri vechitendero ava havaudzi Pirato kuti vatotongera Jesu rufu vachiti amhura. Vanotanga kutomupomera mhosva dzakasiyana-siyana vachiti: “Takawana munhu uyu  achitsausa rudzi rwedu,  achirambidza kutera mitero kuna Kesari uye  achiti iye ndiye Kristu mambo.”—Ruka 23:2.
Semumiririri wehurumende yeRoma, Pirato haangambotadza kunetseka paanonzwa kuti Jesu ari kupomerwa mhosva yekuzviita mambo. Saka anobva adzokera mumuzinda wake, odana Jesu, omubvunza kuti: “Ndiwe mambo wevaJudha here?” Apa ari kureva kuti, ‘Watyora mutemo weRoma nekuzviita mambo uchipandukira Kesari here?’ Zvimwe achida kunzwa kuti Pirato anzwa kuti kudii nezvake, Jesu anoti: “Unotaura izvi iwe pachako here, kana kuti vamwe vanhu vakuudza nezvangu?”—Johani 18:33, 34.
Achiita seasina chaanoziva nezvaJesu asi achiratidza kuti ari kuda kunzwa zvakawanda, Pirato anopindura kuti: “Ndiri muJudha here ini?” Anowedzera kuti: “Rudzi rwako iwewe nevapristi vakuru vakuisa kwandiri. Wakaitei?”—Johani 18:35.
Jesu haaedze kunzvenga nyaya yeumambo inova ndiyo iri mudariro. Gavhuna Pirato anoshamiswa zvikuru nemhinduro yaanopiwa naJesu.
Vapristi vakuru havasi kuziva kuti voita sei nemasirivha asiyiwa akandwa mutemberi naJudhasi. Vanoti: “Hazvibvumirwi nomutemo kuakanda munzvimbo tsvene inochengeterwa pfuma, nokuti iwo mutengo weropa.” Saka vanoshandisa mari yacho kutenga munda wemuumbi wavachashandisa kuviga vatorwa. Unozopedzisira wava kuzivikanwa ‘seMunda Weropa.’—Mateu 27:6-8.
Nei Sanihedrini ichigara dare zvakare mangwanani?
Judhasi anofa sei, uye masirivha 30 aakapiwa akaitiswei?
VaJudha vari kuda kuti Pirato auraye Jesu nemhosva yei?
Jesu Kristu Anourayiwa
Chiitiko chipi chitsva chakatangwa naJesu asati atengeswa ndokurovererwa padanda?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Anotongwa neSanihedrini Ozoendeswa Kuna Pirato
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku Jesu—Nzira Nechokwadi Neupenyu
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Jesu—Nzira Nechokwadi Neupenyu
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Jesu—Nzira Nechokwadi Neupenyu
Upenyu hwaJesu Panyika—Ushumiri hwaJesu Hwekupedzisira Ari muJerusarema (Chikamu 1)
Upenyu hwaJesu Panyika—Ushumiri hwaJesu Hwekupedzisira Ari muJerusarema (Chikamu 2)